Ankoatry ny fankalazana ny faha-44 taona ny vaninandro izay nijoroan’ny Antoko AREMA (19 martsa 1976 – 19 martsa 2020) dia lahadinika maromaro no notapahina. Nisy ny fanovàna vitsivitsy noho ny fanavaozana ny sata sy ny fitsipika anatiny: niova ny sary famantarana ny Antoko AREMA ka naverina mitovy tamin’ny voalohany niforonan’ny antoko; novaina ihany koa ny fanalavana ny anaran’ny antoko ka lasa hoe Antoko REvôlisionera MAlagasy no hiantsoana ny AREMA manomboka izao raha Avant-garde de la Révolution Malgache izany teo aloha. Nisy rafitra nofoanana (Kolejy Nasionaly) sy vaovao noforonina (Komity ny Olon- kendry) ary nitarina hatrany amin’ny Faritra (Komity Mpitantana Nasionaly isaky ny Faritra). Raha ny fandaharam-potoana dia tokony tao amin’ny Hôtely Carlton Anosy ny sabotsy lasa teo ny famaranana ny Kôngresy Nasionaly ity miaraka amin’ny fankalazana ny tsingerin-taonan`ny antoko. Saingy vokatry ny fanambarana izay nataon’Andriamatoa Filoham-pirenena ny alin’ny Zoma 20 martsa 2020 izay mandrara ny fivorivoriana, fepetra noraisina amin’ny fihanaky ny valanaretina COVID- 19 dia voatery hahemotra amin’ny fotoana manaraka aloha izany.